Taorian’ny Volana Maro Nanoherana, Nandray Vola ihany Nony Farany Ireo Rosiana Mpitrandraka Arintany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2016 17:16 GMT
Anglisy mpitrandraka arintany tao Wharncliffe Silkstone Colliery, Barnsley, UK. Loharano: Paul Reckless, Flickr.
Ny 25 May, roapolo ireo mpitrandraka arintany avy ao Gukovo, tanàna kely iray any atsimo andrefan'i Rosia no nanao fanoherana tao Rostov-on-Don nitaky tamin'ny King Coal mpampiasa azy ireo ny mba handoavana ny karamany—ny sasany tamin'ireo efa ho herintaona no tsy nandray. “Omeo anay ny volanay” sy “Atoa. Filoha, arovy ny olona miasa” hoy ny fivakin‘ny sorabaventy nentin'izy ireo.
Namoaka fanambaràna iray ireo mpitrandraka arintany, nanipihany ny fitakian'izy ireo:
Izahay, mpandray anjara amin'ilay famoriana olona, dia mitaky fandraisana hetsika malaky mba handoavana ireo vola an-tapitrisa, karaman'ny mpitrandraka arintany tsy voaloa. Tsy tokony hasehon'ny governemanta sy ny lalàna amin'ireo olompirenena Rosiana ny halemeny manoloana ireo tomponà lavaka fitrandrahana. Kolikoly izany.
Tondroin'ilay fanambaràna nataon'ireo mpitrandraka ny fototry ny fampanantenana “fitoniana” nataon'ny fitondran'i Poutine : fitantanana mahomby, tany tàn-dalàna, filaminana, ary fiantohana fa tsy hanjakazakan'ireo bevola ny “vahoaka”.
Vao teo ampanombohana fotsiny ireo mpitrandraka. Nandritra ireo volana maro taorian'izay, nitombo niha-mafy ny fitakian-dry zareo, tonga hatramin'ny fitokonana tsy hisakafo no niafarany, izay nisarika ireo media nasionaly hifantoka tany aminy sy nanery fanaovana hetsika vitsivitsy avy amin'ny lafin'ireo manampahefana. Raha mbola lavitra aza ny hifaranan'ny tolon'izy ireo, dia mbola ohatra iray hafa ny fikirizan'ireo mpitrandraka ao Gukovo amin'ny fiarovan'izy ireo ny zony, raha momba ny nahavitan'ireo olontsotra tsara fandaminana ao Rosia nanery manampahefana samihafa hanao izay farafahakeliny tokony hataony.
Zavatra iray mahazatra ao Rosia ny olan'ny fahataràn'ny fandoavana karama. Araka ny nambaran'ny tarehimarika farany navoakan'ny Rosstat, tafakatra manakaiky hatramin'ny 3,7 lavitrika robla ($50 tapitrisa) ny fitambaran'ny karama tsy naloan'ny Federasiona Rosiana, mahavoa olona manodidina ny 73.000 eo ho eo. Ny mpiasa amin'ny orinasa sy ny fanorenana no tena voadona mafy indrindra, ary ny fatiantoka miteraka fikatonana ho an'ny 25% amin'ireo karama tsy voaloa ao Rosia.
Loharanom-pifandirana maro amin'ny tontolon'ny asa ihany koa ireo karama tsy voaloa. Araka ny tatitra farany avy amin'ny Ivonterana Fanavaozana ara-Toekarena sy Politika, izay manaraka ireo fifandirana sosialy sy ara-toekarena ao Rosia, nisy 171 ny fifandirana voarakitra mifandray amin'ny resaka karama tsy voaloa teo anelanelan'ny Aprily sy Jona tamin'ity taona ity.
Ny faritr'i Rostov no iray amin'ireo toerana mamay amin'ireny fifandirana ireny. Ny King Coal dia mila mandoa manodidina ny 300 tapitrisa robla ($4.6 tapitrisa) ho anà mpiasa miisa 2.000. Ireo mpitrandraka ao Gukovo monja no tsy maintsy andoavana 130 tapitrisa robla. Lazain'ireo mpitrandraka fa efa tamin'ny 2013 no nanomboka nivangongo tsikelikely ireo karama tsy voaloa. Herinandro iray tamin'ny voalohany, avy eo volana iray na roa, ary nanomboka ny 2015, volana enina .
Hatramin'io ny King Coal no nanabe kibo, namela ireo mpiasany ho maty noana. Taorian'ny nametrahan'ilay orinasa ny filazana fatiantoka tamin'ny 2015, ny taleny, Vladimir Pozhidaev, dia voaheloka ara-pitsarana ho nanao fanararaotam-pahefana, tsy nahavita nandoa ny karaman'ireo mpiasany, ary nanodinkodina ny volan ‘ny orinasa—namela ilay orinasa King Coal niaraka tamin'ny trosa mitentina 1 lavitrisa robla tamin'ny farany. Nametraka fitoriana ireo mpampindrana vola ny King Coal sy ireo mpivarotra—3.500 ny fitambarany—tany amin'ny fitsarana momba ny orinasa matiantoka. Ery amin'ny fara-tàzana amin'io tsipika lavabe ahitàna ny mpitory io ireo mpitrandraka arintany.
Soritr'aretin'ny famotehana ny orinasa miparitaka ao amin'ilay faritra ireo tsy fandoavana karama ireo. Fony vanimpotoana Sovietika, 90 ireo toerana fitrandrahana nananan'ny Rostov. Ankehitriny, efatra sisa no mihodina. Ny karama tsara fandray isambolana ao Gukovo dia 15.000 robla ($230) ho an'ny lehilahy ary 7.000 ($107) ho an'ny vehivavy. Nihena efa ho 7% ny vatan-karama. Ny trosa no amenoan'ireo mponina ireny karama manify dia manify ireny, izay no antony maha-laharana faha-10 an'i Rostov amin'ireo tanàna rehetra mpitrosa ao Rosia.
Zhenya Nesrelyaev, 40 taona, mpitrandraka nandritra ny 22 taona, dia zatra ny nandray karama netinety—20.000 robla ($306) isambolana. Ankehitriny, trosa taminà banky telo no iainany miaraka amin'ny ankohonany. “tsy nahavita namerim-bola aho tato anatin'ny volana roa. Efa in-dimy isanandro ny mpitaky trosa no miantso….Hoy izy ireo: Ataovy antoka ny fanananao. Izany hoe, avela tsy hanana na inona na inona ireo zanako.” Rehefa atambatra, ananan'i Zhenya 305.000 robla ny King Coal amin'ny karama tsy voarainy.
Valerii Dyakonov, mpitrandraka iray efa nitsahatra hisotro ronono ary lasa mpikarakara hetsi-panoherana, nilaza tamin'ny Nezavisimaya gazeta hoe:
Heveriko fa tena faran'izay ratsy indrindra ny toedraharaha amin'izao fotoana izao [miohatra amin'ny tany amin'ny 1990]. Ary tsy raharahian'ny olona rehefa ireo mpitrandraka arintany mitady izay harapany no voaroaka amin'ny tranony satria ny tsirairay no bokan-trosa. Ary iza no mihevitra momba izay isan'ireo fianakaviana rava tato anatin'ny taona vitsy lasa sy ny isan'ireo ankizy lasa mpidoroka zava-mahadomelina?
Io no teodraharaha nanosika ireo mpitrandraka hihetsika. Ilay fanairana kely tamin'ny May no efa lasa fanoherana isanandro taty aoriana. Nitondra sorabaventy izy ireo nivaky hoe “Tsy andevo akory izahay! Omeo ny volanay!” sy hoe “Donbas Rosiana Manohitra ireo Mpangalatra sy Mpandainga!” Takian'izy ireo ny hanamafisana ny hetsika malaky avy amin'i Poutine, ny governoran'i Rostov, ary ny ben'ny tanànan'i Gukovo : rahonan'ireo mpitrandraka ho bahanana ny lalambe migodana M-4 ao Rostov. Niafara taminà fampanantenana poakaty ny fihaonana tamin'ny ben'ny tanàna. Nanangana vondrona iray ry zareo mba handrindra ireo ezaka fanoherany, niaraka tamin'ny fandraisan'i Valerii Dyakonov ny fitarihana. Avy eo, tany amin'ny tapaky ny Aogositra, nanao fitsidihana tampoka tany an-tranon'i Dyakonov ny polisy, nametaka fehy elektronika tamin'ny hato-tongony, ary nanakana azy ho tsy afaka mandao ny tranony noho ny filazàna azy ho nandrahona manampahefana iray teo an-toerana taminà basy rivotra ny volana Novambra 2015 lasa teo. Herinandro taorian'izay, 200 ireo mpitrandraka nombàn'ny fianakavian'izy ireo no nikarakara hetsi-panoherana. Mbola ny “Tsy andevo akory izahay!” ihany no teny fanevan-dry zareo.
Nolazain'ny mpitrandraka iray tamin'ny Novaya gazeta fa:
Tsy matoky an'i Poutine aho. Tsy heveriko akory ny handefa ny zanako hanao raharaha miaramila. Nobeazina teto aho fa tena tsy misy ilàna azy ity governemanta ity…
Andro maro taty aoriana, ny 23 Aogositra, niantso fitokonana tsy hihinana hanina ireo mpitrandraka. Tamin'ny voalohany, nisy 60 ireo mpandray anjara. Avy eo 100. Avy eo 175.
Tsy ela dia nahasarika ny sain'ny media maro, nahitàna ireo gazety marobe an'ny fanjakàna izay nampifantoka ny masony tamin'i Gukovo. Ary avy eo dia mpitrandraka vitsivitsy ihany no naloa ny volany.
Hatreto aloha, notaterin'ny media fa 1.500 ireo mpitrandraka nahazo ampahany tamin'ny karamany. Saingy fandresena somary mbola mamy-marikivy ihany. Ho an'i Dmitry Kovalenko, mpikambana ao anatin'ilay vondrona mpanetsika ireo mpitrandraka,
Ngoly am-pitoerana ny zavatra rehetra. Zara raha misy no mba naloan-dry zareo ho an'ny volana May, ary ankehitriny lazain'izy ireo fa tsy misy vola intsony. Tsy misy na dia tara-pahazavana iray aza hitanay sady tsy manana fanantenana ihany koa izahay. Tena tsy afa-po mihitsy ny olona.